Nhau - Kuzivisa ZKONG's Yekupedzisira Mufashoni Master
Hapana akafanoona kusimba kwedambudziko reCOVID-19, asi mamwe makambani emafashoni ari kuona kuti akashongedzerwa zvirinani kupfuura vamwe-zvikuru nekuda kwekuziva kwavo kwedhijitari.
Hutano uye kuchengetedzeka kwevashandi nevatengi zvinogara zviri pamberi pekutanga. Parizvino, makambani emafashoni akavhara zvitoro, inguva isina kumboitika yekumisikidza uye kumisikidza maturusi edhijitari senge fashoni yekushandisa kure uye kubatana mumatura, nzvimbo dzekuparadzira uye zvitoro zvepanyama.
Kazhinji, yemagetsi mutengo chitaridzi / fashoni tag ine mukana wekupa rutsigiro kumakambani emafashoni mune mana akakosha mapoinzi: inesimba mutengo kuratidza, yakawedzera sevhisi sevhisi, omnichannel ruzivo, kugadzirisa kugadzirisa
Dzakawanda dzenyaya dzedzidzo dzeESL / fashoni yemhando yeZKONG yakanangana nekutaurirana kwevatengi uye ruzivo.
Nechazvino fashoni yemhando yechizvarwa cheZKONG, yemagetsi mapepa ekuratidzira uye mashanu makore bhatiri hupenyu huripo, pamwe nemutengo uye chigadzirwa chinotarisirwa neZKONG Cloud System chero nguva chero nguva.
Iko kukosha kweZKONG fashiontag mumafashoni:
Unganidza ruzivo rwepamhepo uye rwepamhepo rwemaomnichannel chiitiko
Hapana echinyorwa uye anodhura mabasa nekutsiva mapepa mapepa, kuchengetedza vashandi yakawanda nguva yekutengesa
Chinja mitengo yekushambadzira kunoenderana nemwaka / mamiriro ekunze zviri nyore
Kune mamwe maratidziro akawandisa
Chigadzirwa chinopawo manejimendi manejimendi, uye anti-kuba zvinhu
Iko mukana wekutarisa QR-makodhi kuraira chinhu chiri pawebhusaiti
Yakasarudzika dhizaini inokwana yako brand mhando